सोधिने प्रश्न - शेन्जेन उज्ज्वल प्रौद्योगिकी लिमिटेड कं,
वारेन्टी / सेवा
एलसीडी बनाम प्रत्यक्ष हेर्नुहोस् एलईडी भिडियो पर्खाल: तपाईंलाई थाह के चाहिन्छ
तपाईं एक दृश्य प्रणाली को लागि बजार मा हुनुहुन्छ भने, तपाईंले शायद भिडियो पर्खाल प्रदर्शित आकार, आकार, र प्रविधिहरू एक bewildering दायरामा आउने फेला गर्नुभएको छ। तपाईं पनि छन् धेरै निर्माताहरु नै प्रविधिहरू लागि अलग अलग नाम प्रयोग र प्रविधि सबै भन्दा राम्रो कार्य जो बारे विवादित दावी गर्ने सूचना जारी हुन सक्छ।
Understandably, यो खरिदकर्ताहरूको लागि भ्रम धेरै सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। (कहिले काँही "प्रत्यक्ष हेर्नुहोस् नेतृत्व" भनिन्छ) (कहिलेकाहीं भनिन्छ "एलईडी-एलसीडी") "एलसीडी" र "नेतृत्व": धेरै मान्छे को लागि, भ्रम को एक विशेष बिन्दु दुई लोकप्रिय प्रदर्शन प्रकार बीच फरक छ। तिनीहरूले त्यस्तै, एलसीडी र प्रत्यक्ष दृश्य नेतृत्व लाग्न सक्छ तापनि आफ्नै अद्वितीय सुविधा र लाभ दुई भिन्न प्रदर्शन प्रविधिहरू छन्। त्यसैले, ती लाभ के हुन्? तिनीहरूले कसरी फरक छ? तपाईंले ती प्रश्नहरूको जवाफ संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने, हामी सहयोग गर्न यहाँ हुनुहुन्छ!
एलसीडी के हो?
एलसीडी (लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले) समतल प्यानल प्रदर्शन भिडियो पर्खाल र उपभोक्ता इलेक्ट्रनिक्स बजार दुवै मा वर्ष को लागि लोकप्रिय भएको छ कि प्रकार छ। संभावना तपाईं पहिले नै एलसीडी प्रविधि धेरै पटक एक दिन प्रयोग गर्नुहुन्छ, हो - यो भन्दा स्मार्टफोन, कम्प्युटर मोनिटर, र टेलिभिजन स्क्रीन प्रयोग प्रदर्शन प्रकार छ।
एलसीडी प्यानल polarized ग्लास दुई टुक्रा बीच sandwiched तरल क्रिस्टल को एक पत्र बना छन्। तरल क्रिस्टल एक तरल जस्तै बग्छ तर क्रिस्टल जस्तै उन्मुख गर्न सकिन्छ कि अणु छ कि एक पदार्थ हो। एक बिजुली वर्तमान तरल क्रिस्टल लागू हुन्छ जब क्रिस्टल प्रकाश छवि बनाउन पास गर्न अनुमति दिने, सिफ्ट। backlights प्रदर्शन उजाला गर्न ग्लास पछि प्रबन्ध छन् त्यसैले तरल क्रिस्टल, आफ्नै प्रकाश उत्पादन छैन। एल ई डी (प्रकाश-उत्सर्जक डायोड) आज प्रयोग ब्याकलाइटद्वारा को सबै भन्दा साधारण प्रकार हो, र केही निर्माता रूपमा आफ्नो एलईडी-ब्याकलाइट LCDs बजार "एलईडी-एलसीडी।"
एलसीडी को लाभ
एंटीना, उज्ज्वल किफायती, भरपर्दो, र उत्कृष्ट दृश्य प्रदर्शन प्रदान गर्नुहोस्। त्यसैले एलसीडी, एक अति उच्च संकल्प प्रविधि एलसीडी भिडियो पर्खालहरु तीव्र विस्तार पाठ, चित्र, र भिडियो प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। यी लाभ एंटीना भिडियो पर्खाल आवेदन को दायरा लागि एक महान विकल्प, सैन्य नियन्त्रण कोठा विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्र बनाउन।
एलसीडी को बेफाइदा
LCDs भिडियो पर्खाल बनाउन सँगै टाइल गर्दा bezels (वा seams) व्यक्तिगत प्यानल बीच देखिने छन्। प्रत्यक्ष हेर्नुहोस् नेतृत्व जस्तै सहज प्रदर्शन प्रकार एलसीडी तुलना गर्दा यो बेफाइदा रूपमा देख्न सकिन्छ। तर, निर्माता प्रदर्शित को हरेक नयाँ पुस्ता संग bezel-चौडाइ कम छन्, त्यसैले तपाईं नयाँ एंटीना मा bezels धेरै कम सजिलै देखिने हो कि पाउनुहुन्छ।
एलईडी प्रत्यक्ष हेर्नुहोस्
के एलईडी छ?
एलसीडी जस्तै प्रत्यक्ष हेर्नुहोस् नेतृत्व (कहिले काँही सिर्फ भनिन्छ "नेतृत्व") प्रकाश-उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) को प्रयोग मुछिएको समतल-प्यानल प्रदर्शन प्रकार छ। तर, प्रत्यक्ष हेर्नुहोस् नेतृत्व धेरै फरक एलसीडी देखि काम गर्दछ। प्रत्यक्ष हेर्नुहोस् प्रदर्शन एलईडी मा, सानो एल ई डी सयौं एक प्यानल सिधै माउन्ट छन्, र कुनै तरल क्रिस्टल वा polarized ग्लास प्रयोग गरिएको छ। बरु एक ब्याकलाइटद्वारा रूपमा सेवा (तिनीहरूले एलसीडी प्रदर्शित मा जस्तै) को, मा प्रत्यक्ष हेर्नुहोस् एल ई डी एलईडी प्रदर्शित चित्र आफूलाई उत्पादन। प्रत्येक नेतृत्व अनिवार्य एक विशेष भोल्टेज यसलाई लागू गर्दा रंग हल्का emits एक सानो चिम छ। , रातो हरियो र नीलो एल ई डी को समूहहरु छवि उत्पादन गर्न आवश्यक पूर्ण रंग पिक्सेल सिर्जना गर्ने, प्यानल समूहीकृत छन्।
प्रत्यक्ष हेर्नुहोस् नेतृत्व एक पटक विशाल बाहिरी प्रदर्शित मा मुख्य रूप प्रयोग तल्लो-संकल्प प्रदर्शन प्रकार थियो, तर हाल को वर्ष मा सानो एल ई डी को विकास धेरै उच्च रिजोल्युसन सम्भव छ। यी हाल अग्रिम प्रत्यक्ष दृश्य इनडोर भिडियो पर्खालहरु लागि रोमाञ्चक नयाँ विकल्प एलईडी गरेका छन्।
नेतृत्व को लाभ
एलईडी प्रत्यक्ष हेर्नुहोस् प्यानल कुनै bezels छ, त्यसैले तिनीहरू एक पूर्ण गठन गर्ने सँगै टाइल गर्न सकिन्छ सहज भिडियो पर्खाल । एलईडी प्रदर्शित पनि अत्यन्तै, उज्ज्वल विश्वसनीय, ऊर्जा-कुशल छन्, र सबै भन्दा राम्रो रंग शुद्धता र आज उपलब्ध कुनै पनि प्रदर्शन प्रकार को दर ताजा गर्नुहोस्। यी गुणहरू बनाउन प्रत्यक्ष दृश्य ठूलो मात्रा डिजिटल चिन्ह र उच्च-प्रभाव दृश्यहरू माग अन्य आवेदन एक उत्कृष्ट विकल्प एलईडी।
नेतृत्व को बेफाइदा
मूल्यहरु आउँदै वर्ष कम गर्न आशा गरिन्छ तापनि उच्च संकल्प एलईडी पर्खालहरु हाल धेरै पटक LCDs भन्दा बढी महंगा छन्, त्यसैले यो प्रविधि सबैभन्दा ग्राहकहरु लागि सम्पर्क बाहिर अझै पनि छ। साथै, पनि उच्चतम संकल्प अझै पनि प्रदर्शित नेतृत्व अति-उच्च रिजोल्युसन एलसीडी उपलब्ध प्रदान गर्न सक्दैन। प्रयोगमा अवस्थामा उत्कृष्ट विवरण ध्यान आवश्यक लागि, एलसीडी प्रदर्शित अझै पनि उपयुक्त हुन सक्छ।
र साधारण लाभ - - एलसीडी र प्रत्यक्ष दृश्य एलईडी भिडियो पर्खालहरु हामी मद्दत गर्नुभएको मतभेद केही प्रकाश बगाएको आशा। अन्ततः, दुवै उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रविधिहरू छन्, र केवल आफ्नो विशिष्ट आवेदन र बजेट लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
अब हामीलाई कल गर्नुहोस्: +86 755 83193425